एल क्लासिको र केही तथ्य: - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एल क्लासिको र केही तथ्य:
प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०७३, शनिबार
युरोपियन फुटबलमा बुडेसलिगा, इंग्लिस प्रिमियर लिग, सिरी ए, लिग वान र ला लिगालाइ उत्कृष्ट लिग मानिन्छ। युरोपियन च्यान्पियन्स लिगमा प्रभुत्व जमाउने क्लहरु प्राय यिनै लिगका हुने गर्दछन्। ठूला र धनी हुने भएकाले राम्रा खेलाडीको पहिलो गन्तव्य यिनै क्लब हुने गर्दछ। ला लिगाका टिमहरु सँधै राम्रा खेलाडी भित्रिनु पनि यिनै कारणहरू त हुन् । पछिल्लो समय च्यान्पियन्स लिग र युरोपा लिग अरू लिगका क्लबलाई जित्न दिएका छैनन् ला लिगाका टिमले। यहीँ बाटै थाहा हुन्छ कि ला लिगाको युरोपियन फुटबलमा प्रभुत्व कति छ भनेर। ला लिगा सामान्यतया दुई ठूला क्लबबीच घुम्ने गरेको पाइन्छ बार्सिलोना र रियल म्याड्रीड बीच। यी दुई क्लबले मात्रै ला लिगा समग्रमा ५६ चोटि लिग जितिसकेका छन। स्पेनिस फुटबल लिगमा रीयल म्याड्रीड र बार्सिलोना बिच हुने खेललाई ‘एल क्लासिको’ भनिन्छ । तर ‘एल क्लासिको’लाई अर्थ्याउँदा स्पेनीस भाषामा ला-लिगाको खेल भन्ने बुझिन्छ।
युरोपका प्रतिष्ठित लिगहरू अनि ती टिमहरू बिच हुने खेलहरु जस्तै म्यान्चेस्टर डर्बी, बार्यन म्युनिख भर्सेस डर्टमुन्ड (ब्याटल अफ टु पावरहाउस अफ जर्मन), मिलान डर्बी मात्रै नभएर यु इ एफ ए च्याम्पियन्स लिग फाइनल हेर्ने भन्दा बढी फुटबल दर्शकले एल क्लासीको हेर्ने गरेको पाइन्छ।
रियल म्याड्रीड र बार्सिलोना बिश्वका लोकप्रिय, धनी मात्रै नभएर राम्रा खेलाडीको पहिलो गन्तव्यको रूपमा क्लबको नाउँ अग्रपङ्तीमा पनि आउँछ। सामान्यतया रियल म्याड्रिड स्पेनिस धनाड्य र राजखान्दानको टिमको रूपमा मानिन्छन। समर्थकहरू स्पेनिस सरकार समर्थित अनि बार्सीलोना समर्थकहरु क्याटालान समर्थित मानिन्छन्।
पहिला क्याटालोनियालाई स्पेनिस सरकारले अत्याचार गरेकोले त्यहाँका जनताले आफ्नो राज्यसँग बदला लिन बार्सिलोना क्लब खोलेका थिए, जसको एउटै कारण थियो म्याड्रीडका क्लबलाइ हराउनु। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ यी दुई क्लबको शत्रुता। तेसैले एल क्लासिकोलाई स्पेन भर्सेस क्याटालुनीया पनि भन्ने गरिन्छ। यी दुई स्पेनिस क्लबका खेलले जित हारमा मात्रै सीमित राख्दैनन, त्यहाँको ब्यापार व्यावसाय, राजनीति, अनि संस्कृतिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएर नै एल क्लासीको को महत्त्व बेग्लै रहेको छ । एल क्लासिकोका यस्ता केही घटना छन् जुन दुबै क्लबका समर्थकले कहिलै बिर्सने छैनन्।
सन् १९४३ कोपा डेल रे सेमिफाइनल :
रियल म्याड्रीड समर्थकले कहिलै भुल्न नचाहने अनि बार्सिलोना समर्थकले सधैं भुल्न चाहने खेल यही होला सायद। १३ जुन १९४३ को दिन कोपा डेल रे सेमिफाइनलको दोस्रो लिग रियलको म्याड्रीड को घरेलु रंगशालामा भएको थियो जसमा रियल ११-१ बार्सा बिजयी भयो । जुन खेल अहिले पनि थुप्रै विवादित घेरामा रहेका मध्य एक हुन आउँछ। त्यतिबेला रेफ्रीले फिनिसिङ गरेको भनेर बार्सिलोना समर्थके आरोप लगाउदै आएका छन्। पहिलो लिग बार्सिलोनाले आफ्नो घरेलु रंगसाला लेस कोर्ट्समा ३-० को जित निकालेर दोस्रो लिगमा ११-१ ले सुम्पिनु परेको थियो।
डि स्टेफानो ट्रान्सफर:
अल्फ्रेडो डे स्टेफानो सायद रियल म्याड्रीड समर्थकले कहिलै नबिर्सिने नाउँ। आखिर उनकै पालामा त म्याड्रीडले ११ चोटि जितेका च्यान्पियन्स लिग ट्रफी मध्य ५ वटा थिए। भनिन्छ उनको पालामा जस्तो टिम अहिलेसम्म पनि म्याड्रीडले पाउन सकेको छैन। बार्सिलोनाले स्टेफेनोलाइ कन्ट्र्याक सम्झौता गरेर पनि फेरी क्यान्सिल गर्नुपरेपछि म्याड्रीडको भाग्य खुलेको थियो, त्यही भएर त क्याटलान समर्थकले स्टेफेनाको नाउँ बेलाबेला लिने गर्छन्।
फाइनलमा बोटल प्रहार:
यी दुई टोलीबिचको खेल संधै तनावपुर्ण हुने गर्दछन। आक्रोशपूर्ण व्यवहार खेलमा पनि देख्न पाइन्छ। यस्तै खेल मध्य सन् १९६८ जुलाई ५ का दिन कोपा डेल को फाइनल पनि एक हो। गेम रियल म्याड्रीडको घर सान्टियागो बर्नाबाउमा थियो। गेम चलिरहँदा बार्सिलोना १-० ले अगाडि थियो जब, खेल अन्तिम समयतीर आइपुग्न थाल्यो , रियल म्याड्रीड समर्थकले रेफ्री र बार्सिलोना खेलाडीमाथी सिसाका बोतलहरू प्रहार गर्न थाले । त्यस खेलले रेफ्री एन्टोनियो रीङ्गोलाई पछि सम्म पनि निकै विवादमा तानिदीएको थियो।
अहिलेसम्मको हेड टु हेड हेर्दा:
यी दुई क्लब अहिलेसम्म २३१ चोटि (अफिसियल) खेलमा आमने-सामने भएका छन् जसमा ९३ म्याच रियल म्याड्रीडले जितेको छ भने ९० म्याच बार्सिलोनाले । ४८ ओटा मात्रै खेल बराबरीमा टुंगिएका छन्। तेस्तै रियल म्याड्रीडले ३९० गोल बार्साको पोष्टमा गरेको छ भने बार्सिलोनाले ३७६ मात्र। त्यस्तै पाँच भन्दा बढी गोल अन्तरमा रीयल म्याड्रीडले ६ पटक जितेको छ भने बार्सिलोनाले ९ पटक । यी दुई क्लब युरोपको उत्कृष्ट पाँच लिग मा सबैभन्दा बडि उपाधी भित्र्याउनेमा पनि अग्रपंक्तिमा आउछन् जसमा बार्सिलोनाले ९१ चोटि अनि रियल म्याड्रीडले ८४ पटक जितेका छन् । यहीँबाट थाहा हुन्छ कि एल क्लासिकोको चुनौती !
पछिल्ला दस वर्षलाई हेर्दा:
राउल, कासियास, सर्जियो रामोस, कृस्टियानो रोनाल्डो, गेराथ बेल, जस्ता विश्व फुटबलका स्टारले म्याड्रीडबाट खेलेका छन भने रोनाल्डिन्हो, सामुइल इटो, जाभी हर्नान्डेज, इनिस्टा, मेस्सी, कार्लोस पुवेल जस्ता विश्व फुटबल स्टारले यता बार्सिलोनाबाट पनि खेलेका छन्। त्येसैले त पछिल्ला १० वर्षमा यी दुई क्लब युरोपकै निकै खतरनाक भएका देखिन्छन्। युरोपीयन च्यान्पियन्स लिग उपाधी होडमा यी दुई क्लबले पछिल्ला दस वर्षमा ६ जितेका छन् जसमा ४ बार्सिलोनाले भने २ रियल म्याड्रीडले। तेस्तै ला लिगामा ७ पटक बार्सिलोनाले २, रियलले १ पटक मात्रै रियलको सहरी छिमेकी क्लब एथलेटिको म्याड्रीडलाइ दिएका छन। ला-लिगामा पछिल्ला १० बर्षमा यी दुई क्लब २१ चोटि आमने सामने भएका छन्। जसमा बार्सिलोनाले १० चोटि जितेको छ भने रियल म्याड्रीडले ७ चोटि ३ वटा मात्रै खेल ड्र भएका छन् । रियल म्याड्रीडले ३१ गोल गरेको छ भने बार्सिलोनाले ४३ गोल गरेर म्याड्रीडलाई निकै चुनौती दिँदै आइरहेको छ।
कस्तो होला त यसपालिको क्लासिको?
बार्सिलोनाले २०११ पछिका प्रत्येक एल क्लासिकोमा गोल गर्दै आइरहेको छ। आक्रमणको बागडोर समालेका मेस्सी, सुवारेज र नेमार (एमएसएन) बाघ जस्तै डरलाग्दो रुपमा आइरहेका छन्। बेन्जेमा, बेल र कृस्टियानो रोनाल्डो (बिबिसी) रियल म्याड्रीडको धारीलो हतियारका रुपमा रहेका छन्। फ़ेरि यो सिजन रियल रोकिँदै नरोकिने गरि आइरहेको छ। उसको फम हेर्दा लाग्छ भदौरे भेल भन्दा कम छैन, सबलाई तहसनहस पार्ने ! यो सिजन कुनै पनि खेल हारेको छैन। उसले आफ्नो अनबिटन संख्या २१ पुर्याइसकेको छ भने ला-लिगामा दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सा भन्दा स्पष्ट ६ अंकको अग्रता लिइ सकेको छ। यस्तो अबस्थामा अझै फममा आउन संघर्षरत बार्सालाई टाउको दुख्नु नौलो कुरा होइन। अझ भनौं बार्सासामु रियलको रहेको आफ्नो अपराजित यात्रालाई लम्ब्याउन नदिएर रोक्नु चुनौती पनि रहेको छ। पछिल्लो समयमा क्लासिकोलाई मेस्सी भर्सेस रोनाल्डो भनेर मिडियाले ल्याएका पनि छन्। जसमा मेस्सी २१-१५ गोलले रोनाल्डो भन्दा अगाडि छन्। यी दुईले २००८ पछि फिफा बालोन डेओर अरुलाइ जित्न दिएका छैनन् जसमा मेस्सी ५-३ ले रोनाल्डो भन्दा अगाडि छन् । बार्सिलोनाका प्रभावशाली मिडफिल्डर आन्द्रे इनिस्टा चोटका कारण खेल्ने नखेल्ने अन्यौल बिच लुइस एन्रीकेले खेल्ने बताइसकेका छन्। उनको अनुपस्थिती मा आफ्नै घर क्याम्प नाउमा रियल म्याड्रीडलाई हराउन निक्कै गार्‍हो पर्ने कुरा क्याटालान समर्थकलाई राम्रैसँग थाहा छ । उता बेल घाइते भएर चार महिना मैदान नउत्रीने भएपछि म्याड्रीडलाइ टाउको दुखाइको बिषय बन्न पुगेको छ। यता बार्सालाई भने केही राहत मिलेको छ। अग्रपंक्तिको तुलना एमएसएनसँग बिबिसी लाई गरेर एउटै तराजुमा राख्न सकिदैन। एमएसएन ले यो सिजन ३६ गोल गरिसकेको छ भने बिबिसीले २५ मात्र। सर्जिओ रामोस, पेपे, मार्सेलो जस्ता हस्ती रहेको डिफेन्स लाइन रियलको जति बलियो छ त्यत्तिकै बलियो बार्साको अग्रपंक्ति छ। बार्साले यो सिजन लुकास डिग्ने, सामुइल उम्टिटी जस्ता युवा खेलाडी लाई भित्र्याएर मजबुत बनाएको मास्केरानो नेतृत्वको डिफेन्सलाइन लाई चिर्न बिबिसी लाई पक्कै पनि सजिलो छैन। यस्तो अबस्थामा वेल पनि घाइते भएका छन्।
समग्रमा भन्दा यी दुई क्लब एकअर्का सित कहिलै हार्न चाहदैनन्। त्येसैले हारजित वा बराबरीले पनि ठुलै अर्थ राख्ने हुन्छ। गत सिजनको क्लासिकोमा रीयल म्याड्रीड आफ्नै घर सान्टियागो बर्नाबाउमा ४-० को लज्जास्पद हार बेहोरे पछी आफ्ना कोच बेनिटेजलाइ बर्खास्त गर्नु परेको थियो। अहिलेका कोच जिदान र एन्रीकेले आफ्नो खेल जिवनमा पनि एकअर्का विरुद्ध क्लासीको खेलिसकेका छन्। अहिले प्रशिक्षकको रूपमा दोस्रो क्लासीको खेल्न थालिसकेका यी १(० ले एन्रीके भन्दा जिदान अगाडि छन्। आखिर उनै जिदानले त गत क्लासीको (अप्रील ३) को मा क्याप्न नाउमै जिताएका थिए म्याड्रीडलाइ। त्यसको दबाबमा पनि पर्न सक्ने छन् एन्रीके। उता रोनाल्डोको पनि ढल्किँदै गएको उमेर खेलमा देखिन थालिसकेको छ तर उनले गत वर्लडकप क्वालिफाइंग म्याच र म्याड्रीड डर्बीमा ह्याट्रिक गरेर आफ्नो स्तर उस्तै रहेको प्रमाणीत गरिसकेका छन्। लालिगामा पनि १० गोल गरेर उच्च गोलकर्ताको सुचिमा अग्रस्थानमा छन् भने उनलाई पछ्याउँदै मेसीले ९ गोल गरिसकेका छन्। बेलको इन्जर्ड म्याड्रीडलाई टाउको दुखाइको रूपमा रहेको छ। आफ्नो घरेलु मैदानमा हुने यो सिजनको पहिलो क्लासिको जसरी नि जित्ने दाउमा छ बार्सिलोना भने रियल त्यसलाई रोक्दै नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्दै लगातार क्याप्न नाउमा दोस्रो जित दर्ता गर्ने चक्करमा हुनेछ। त्यो भन्दा ठूलो रियल अझै आफ्नो अपराजित यात्रा लम्ब्याउदै बार्सासित स्पष्ट ९ अंकको अग्रता लिन चाहन्छ भने बार्सा रोक्न। अहिलेको अबस्थामा म्याड्रीड फममा छ र निकै बलियो पनि देखिएको छ फेरि यो क्लासिको हो यहाँ जे पनि हुन सक्छ।